သစ္စာတရားများစုဝေးရာ.....: June 2011
ဘာသာတရားဟူသည် ယုံကြည်မှုမှ မြစ်ဖျားခံပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်ပေသည်။ ယုံကြည်မှုမှသည် အားထားမှု၊ ကိုးကွယ်မှု၊ လိုက်နာဆောင်ရွက်မှု စသည်တို့ ဆင့်ကဲဆင့်ကဲ ဖြစ်ပေါ်လာရပေသည်။ မည်သည့်ဘာသာတရားမဆို လူမျိုးတစ်မျိုးတည်းပိုင် မဟုတ်ဘဲ၊ သက်ဝင်ယုံကြည်မှုရှိသူတိုင်းနှင့် သက်ဆိုင်မှုရှိပေသည်။ လူသားတို့၏ ကြီးပြင်းရာနေရာ ဒေသ၊ မျိုးရိုးအစဉ်အဆက်၊ ပတ်ဝန်းကျင်စသည်တို့၏ လွှမ်းမိုးမှုကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ အသိဥာဏ်၊ အတွေးအခေါ်နှင့်ဆင်ခြင်တုံတရားကို လိုက်၍လည်းကောင်း၊ ယုံကြည်မှုအမျိုးမျိုးကွဲပြားမှုပေါ် မူတည်လျက် ဘာသာတရားအမျိုးမျိုး ပေါ်ထွန်းလာရခြင်း ဖြစ်ပေသည်။
လူမျိုးရေးအစွဲနှင့် အစွန်းရောက်စိတ်ဓာတ်ရှိသူများသည် မိမိတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာတရားနှင့် လူမျိုးရေးကိုရောထွေးလျက်၊ ငါ့လူမျိုး ငါ့ဘာသာတရားဟု တဖက်သတ်ဆန်ဆန် တဇောက်ကန်း ပြုမူတတ်ကြပါသည်။ ဤကဲ့သို့သော လူများကြောင့် အားနည်းသောလူမျိုးစုများနှင့် အလယ်အလတ် စိတ်ဓာတ်ရှိသော လူမျိုးစုများမှာ အနိုင်ကျင့်အနှိမ်ခံရတတ်ကြပါသည်။
မည်သည့်ဘာသာတရားကို ကိုးကွယ်သည်ဖြစ်စေ၊ မိမိတို့လူမျိုးသာမြင့်မြတ်ပါသည်ဟု ဆိုစေ၊ စည်းစိမ်ဥစ္စာ မည်မျှပင် ကြွယ်ဝပါစေ၊ အာဏာ ရာထူး ဂုဏ်ရှိန်မည်သို့ပင် ကြီးမားပါစေ၊ ဘွဲ့ထူးပညာ အဆင့်ဆင့် လက်ဝယ်ပိုင်ထားသည်ဖြစ်စေ လူ့အဆင့်အတန်း လူအမျိုးအစားဟူသည် နှစ်မျိုးသာလျှင် ရှိပါသည်။ ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာတရား၊ ကိုယ်ကျင့်သီလနှင့် ကိုယ်ချင်းစာတရား အပြည့်အဝရှိသော လူကောင်းနှင့် လူဖြစ်သော်ငြားလည်း လူ့အကျင့် လူ့စည်းကမ်း လူ့သီလကို ထင်သလို ချိုးဖောက်ပြီး လူသားချင်းတန်ဖိုးမထားတတ်သော လူ့တိရစ္ဆာန်စိတ်ဓာတ်ရှိသော လူဆိုးတို့ ဖြစ်ပေသည်။
မည်သည့်ဘာသာဝင်မဆို ယုံကြည်မှုရှိမှသာလျှင် လိုက်နာဆောင်ရွက်မှု ရှိကြပါသည်။ လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုရှိသူကိုသာလျှင် အမှန်တကယ် ယုံကြည်သက်ဝင်သူအဖြစ် လက်ခံရပါမည်။ ယုံကြည်ပါသည်ဟု ပါးစပ်က ပြောသော်လည်း ဘာသာတရားအဆုံးအမများကို အမှန်တကယ် လိုက်နာမဆောင်ရွက်နိုင်ပါက ယင်းဘာသာဝင်အဖြစ် သတ်မှတ်ရန်ခက်ခဲပါလိမ့်မည်။ ယုံကြည်မှုနှင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်မှု ထပ်တူကျသူကိုသာလျှင် အစစ်အမှန်အဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။
ထို့ပြင် မျက်ကန်းယုံကြည်ပြီး သေသေချာချာ မသိနားမလည်သူများနှင့် သိရှိနားလည်သော်လည်း တိတိကျကျ မလိုက်နာသူများကြောင့် ဘာသာတရား၏ အဆင့်အတန်းကျဆင်းတတ်ပါသည်။ လူ့အဆင့်အတန်းမြင့်မားသူ လူကောင်းတို့အပေါ် ဘာသာတရား၏ အဆုံးအမတရား လွှမ်းမိုးမှု ရှိနိုင်သော်လည်း၊ ဘာသာတရား အဆင့်အတန်းမြင့်မားမှုသည် လူတိုင်းအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှု မရှိနိုင်ပေ။ ယုံကြည်မှုနှင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်သူများအပေါ်တွင်သာ သြဇာသက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပေသည်။ ထို့ကြောင့် အဆင့်အတန်း မြင့်မားသော ဘာသာတရားကိုးကွယ်သူတိုင်းအား လူကောင်းဟု မသတ်မှတ်နိုင်ပေ။
လူမျိုး၊ အသားအရောင်နှင့် အဆင့်အတန်း
အချို့တိုင်းပြည်များတွင် လူမျိုးရေးခွဲခြားမှု၊ အသားအရောင်ကွဲပြားမှုနှင့် မျိုးရိုးအဆင့်အတန်း အနိမ့်အမြင့်ဟူ၍ မတူညီသော အခွင့်အရေးခြားနားမှုများ ရှိကြပါသည်။ အမှန်စင်စစ် မိမိတို့ပြုခဲ့သမျှ ကံတရားများပေါ် မူတည်လျက်ဖြစ်ပေါ်လာသော အသွင်အပြင်များ၊ အခြေအနေများကို ရွေးချယ်နိုင်စွမ်း မရှိသကဲ့သို့၊ ငြင်းဆန်နိုင်ခွင့်လည်း မရှိကြပေ။ သို့ရာတွင် ပုံပန်းသဏ္ဌာန် အသွင်အပြင် အသားအရောင် များကို ပြုပြင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်း မရှိသော်လည်း၊ မိမိတို့၏ကံတရားများနှင့် စိတ်ဓာတ်များကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဘဝအခြေအနေများကို ရယူနိုင်ကြပါသည်။
မြင့်မြတ်သော ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့် စောင့်ထိန်းရမည့်သီလတရားတို့ကို ပစ်ပယ်လျက် မိမိတို့၏ စားဝတ်နေရေးအတွက် မသမာသော နည်းမျိုးစုံဖြင့် ကြိုးပမ်းမှုသည် လတ်တလောအခြေအနေအတွက် ကောင်းမွန်နိုင်သော်လည်း၊ ရေရှည်တွင်မူ အဆင်မပြေမှု ဒုက္ခများစွာကို ရင်ဆိုင်ကြရပေမည်။ ငတ်လာလျှင် ဘာမဆိုလုပ်လိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ခြင်းသည် မရှိလို့မလှူ၊ မလှူလို့မရှိ ဆိုသကဲ့သို့ပင် ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ သီလမရှိခဲ့ခြင်းကြောင့် ဆင်းရဲခြင်းဖြစ်ပေါ်စေသော်လည်း၊ ဆင်းရဲမှုကြောင့် သီလမဆောက်တည်နိုင်ပါက သံသရာဝဋ်ဆင်းရဲမှ မည်သည့်အခါမျှ ရုန်းထွက်နိုင်မည် မဟုတ်တော့ပေ။ သီလဆောက်တည်မှုကြောင့် ဆင်းရဲရာမှ ချမ်းသာလာခြင်းသည် အတိုင်းအတာတခုအထိ တည်မြဲနိုင်သော်လည်း၊ သူတပါး မျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်ကျပြီးမှ ရလာသော မသမာသောနည်းဖြင့် ငွေကြေးချမ်းသာလာခြင်း၏ အကျိုးဆက်သည် စိတ်ဆင်းရဲ ကိုယ်ဆင်းရဲဖြင့် ဘဝကို အဆုံးသတ်ရမည့်အပြင် သံသရာတလျှောက်တွင်လည်း ဆိုးကျိုးပေါင်းစုံကို ရင်ဆိုင်တွေ့ရပေလိမ့်မည်။ တဘဝ တခဏ မိမိတို့ဘဝ အဆင်ပြေချမ်းသာစေရန် လူသားချင်းမစာနာ လူလူချင်းမညှာတာဘဲ တခြားသူများအား ဒုက္ခပေးသူများသည် တချိန်ချိန်တွင် ထပ်တူထပ်မျှခံစားမှု ဝဋ်လည်ခြင်းကို ပြန်လည်ခံစားရမည် ဖြစ်ပါသည်။
အရေအတွက်ထက် အရည်အချင်းက ပိုအရေးကြီးပါ၏….
သာသနာတည်တံ့ရေးနှင့် သာသနာသန့်ရှင်းရေးတည်းဟူသော အရည်အချင်းရှိမှသာ သာသနာပြန့်ပွားရေးတည်းဟူသော အရေအတွက် များပြားလာနိုင်ပါသည်။ မြတ်စွာဘုရား သာသနာအဆုံးအမများကို အမှန်တကယ်လိုက်နာခြင်းမရှိဘဲ အမည်ခံဗုဒ္ဓဘာသာဦးရေ များပြားလာခြင်းသည် သာသနာပျက်ဆီးခြင်း၏ အစပျိုးလက္ခဏာဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။ သက်ဝင်ယုံကြည်မှု သဒ္ဓါတရားနှင့် လိုက်နာကျင့်သုံးမှု အကျင့်မြတ် ရှိသောသူ များပြားလာပြီး လက်ဆင့်ကမ်း အမွေပေးခြင်းဖြင့်သာ သာသနာရေရှည် တည်တံ့ခြင်း ရှိလာနိုင်ပါသည်။ ဗုဒ္ဓသာသနာသည် ဆွဲဆောင်စည်းရုံးပြီး ဆုတောင်းပြည့်စေတတ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ၊ ကိုယ်တိုင်လိုက်နာ ကျင့်ကြံအားထုတ်ခြင်းဖြင့်သာ တသက်တာ စွဲမြဲစေရခြင်းဖြစ်ပေသည်။ မက်လုံးပေး ဆွဲဆောင်မှုနောက် ပါသွားရခြင်းမှာ ဗုဒ္ဓသာသနာအဆုံးအမကို မလိုက်နာ မကျင့်သုံးခြင်းတည်းဟူသော အကြောင်းတရားကြောင့် ယုံကြည်သက်ဝင်မှုဟူသော အကျိုးတရားမခိုင်မြဲခြင်းကြောင့်သာ ဖြစ်ပေသည်။ ယုံကြည်မှုရှိမှသာ လိုက်နာမှုရှိမည်ဖြစ်ပြီး၊ အပြန်အလှန်အားဖြင့် လိုက်နာကျင့်သုံးမှုရှိမှသာ ယုံကြည်မှုခိုင်မြဲမည်ဖြစ်ပေသည်။
မည်သည့်အကြောင်းအရာမဆို အခြေခံကျကျ အသေအချာ နားလည်သဘောပေါက်မှသာလျှင် အဆင့်မြင့်ဆီသို့ တက်လှမ်းနိုင်ပါမည်။ အခြေခံကျကျ နားလည်သဘောပေါက်သူများသည် ယုံကြည်မှုခိုင်မြဲပြီး လိုက်နာကျင့်သုံးမှု ပိုမိုစိတ်ပါဝင်စားလာနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အခြေခံသင်တန်းများ သင်ကြားမှုသည် အလွန်အရေးပါလှပါသည်။ နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားထက် အပါယ်လေးပါး လွတ်မြောက်ရေးတရားက ပိုမိုအရေးကြီးလှပါသည်။ အခြေခံတရားများကို နားလည်မှုမရှိပါလျက်နှင့် အဆင့်မြင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်တရားများကို နားလည်ရန် ခက်ခဲပါလိမ့်မည်။
မိမိတို့၏ သာသနာ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေး၊ မြင့်မြတ်တင့်တယ်စေရေးနှင့် သိက္ခာမြင့်မားရေးသည် မိမိတို့၏ အယူဝါဒနှင့် လုပ်ရပ်မှန်ကန်ခြင်းပေါ် မူတည်လှပါသည်။ အချို့သော ဘာသာရေးခေါင်းဆောင် ရဟန်းတော်အချို့၏ မှားယွင်းသော အယူဝါဒများနှင့် လုပ်ရပ်များကြောင့် အခြားသော ဘာသာဝင်များ၏ အထင်အမြင်သေးခြင်း၊ နားလည်မှုလွဲခြင်းများကို ခံရတတ်ပါသည်။ ထိုထက် ဆိုးဝါးသည်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အချို့၏ စိတ်ပျက်မှု အထင်သေးမှုသည် ယင်းတို့ကို ဘာသာပြောင်းစေသည်အထိ ဖြစ်ပွားစေတတ်ပါသည်။ ထို့ပြင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် လူအချို့၏ ငါ့လူမျိုး ငါ့ဘာသာဟူသော အစွန်းရောက် တဇောက်ကန်းဆန်ဆန် ပြုမူပြောဆိုမှုများသည်လည်း ဗုဒ္ဓသာသနာ၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို ကျဆင်းစေတတ်ပါသည်။
ဆရာ၊ ဒကာ လက်တွဲညီစို့….
ဘုရားသာသနာရေရှည်တည်တံ့ရေးသည် ရဟန်းသံဃာတော် ဆရာတော်များနှင့် တပည့်သား ဒကာ ဒကာမများ၏ လက်တွဲညီညီဆောင်ရွက်မှုပေါ် မူတည်ပါသောကြောင့် မိမိတို့လက်ထက်တွင် သာသနာတော်ကြီး မြင့်မြတ်တင့်တယ်စေရေးနှင့် မညှိုးနွမ်း မကွယ်ပျောက်စေရေးသည် လူတိုင်း၏ သမိုင်းပေးတာဝန် ဖြစ်ပါသည်။ ။
Posted by ထက်စုနှင်းဆီ at 1:40 PM0comments